Madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray Xaalka dalka.
September 13, 2021 Xuseen 15
Nin daad qaadey xumbo cuskey
Too little too late…. Waryaa Xaarmaajo arinkaan farhaaga mar hore ayuu ka baxay wax aad qor qorto hada wax shaqaynaya maba aha waxay sii abuuraysaa shaki kale.
Haduu odhan lahaa nimanka la tuhunsan yahay ha la soo xidh xidho boodhka iyo siigada hada cirka isku shareeray way yara dagi lahaayeen , isagana wax yar ayaa la aamini lahaa, lakiin gudi ayaan hada saaray waxay noqonaysaa wax ayuu daboolayaa isaga ayaan ka dhex muuqda oo ku jira.
Farmaajow nin wax fahmaya ma ahide meesha iskaga huleel! Guddi baan saarayaa kulahaa! War dhibaatada Iakraan gabar la yiraahdo oo Gaaljel ah maahane waa Kursiga aad ku fadhido ee ama Sharciyad aad ku joogto raadso ama meesha ka huleel intan bahdil kuugu filane!
Markaad bilo Madaxwene ahayd ayaa Wasiir dowladaada ka tirsan si bareer ah loo toogtay, markaas ayaa lagu yiri Mooryaankii toogtay car taabo. Saa in aad nacas tahay, meeshii aad dhihi lahayd isku mar ha la aaso ayaad hoos fiirisay, sida in Ifka laguugu ciili jiray! Maalintaa ayuu xaalkaagu noqday, ilko DOOFAAR ii sahansan!
Wixii intaas ka dambeeyayna Hawiye Kursiga waay kugula fadhiyeen, Haddeerna waayba kaa qaateen adigoo indha taagaya! Kkkk
Wallaahaan aqbaleen dullinimada aad aqbashay ee ama anoo sharaf leh ayaad kursigaa Soomaali u soo celin lahaa, ama meeshaay doontaba ha ka dhacdee, rag aay Xasan Sheekh, C. C/shakuur iyo Mahad Salaad ugu horreeyaan ayaan Aakhiro u diri lahaa inta aanan meesha ka tagin!
Dub ku bax Indho muxuu liite yahay!!!
Weligiin ma aragteen Gudi Farmaajo magacaabay ha noqoto mid baadhid xoolo qaran la dhacay, dad daad qaaday, dad alshabaab xasuuqday iyo mid khilaaf xalineed oo weligeed shaqadii loo diray ka soo baxda umadana la wadaagta xogtii ay heleen?
Hadaad hesho sharad baan bixin. Waayo Farmaajo gudi uma magacaabo xal raadin ee wuxuu u magacaabaa inay indhaha shacabka ka qariyaan jariimada-ha uu dalka iyo dadka ka galay!
Waar neefkan may tolkii ka qaataan Villa Ugandha mise wuxu waa tol-laawe!
Kkkk walahi fargaajo waa habar dhaliwayday, intaan dunida ku noolaa wax ka doqonsan fargaajo ma arag waa nedel faaruq ah oo dadnimada iyo damiirka ka dhintay. Waxaase igalasii daran dad xunka iyo Daarood yar yara ku daba safan. War ileen cayayaanku bakhtiga kama ag tagaan ee waa ku yamuumaan dad xunka Daarood yar yare waa uun cayayaankaas bakhtiga villa wardhiigley yaal ku xoonsan.
Waar haddee MADAXWEYNAHANAGA calyada ka daaya!
Inkasta oo aan qabo in kiiskan dib loogu dhigo dawladda dhalandoonta, waaba haddii qolyo aan ogahay doorashada oggolaadaane; haddana, MADAXWEYNAHA jamhuuriyaddu (min Lawyacaddo illaa Libooye) xaq buu u leeyahay in uu guddi magacaabo. Waxa aanse MADAXWEYNE ka sii jeclaanlahayn adiga oo ummadda soo hor istaaga oo la hadla.
Hilaacow . Ha iska
Caytmeene daa . Cuqdad iyo ciil bay qabaan. Waa Gun ciishaysan markaa calyadoodu iyo caydoodu wax u dhimimayso medaxweynah shafata leh.
Who let’s out the Dogs!??
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo Dadka iyo Dalka Soomaaliya Gudaha iyo Dibeddaba, waana loo jeedaa.
Taariikhdu waa qoran tahay.
Shaqdiyaddu waa wax ah ” MIRACLE “ma ahan wax uu qof kasta Hibo loo siiyey, waxaa jira wax la yiraahdo”Talent ,Talent is a Natural Ability “Sidaas awgeed Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu leeyahay dhammaan Astaamaha looga baahan yahay Qof Hoggaamiye Ama Madaxweyne u ah ummad ama Nation.
Soomaalidu waxaay tiraahdaa War dhafoor buu ku yaalla.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kor u hayaa Karaamada iyo Sharafta Ummadda Soomaaliyeed, wuxuu ilaalinayaa Madaxbannaanida, Qarannimada Soomaaliya.
The history will tell the truth.
Wadankii iyo wixii laqabtay
Qabiil baaidikala waynaaday
Mamaqasheen somali tahrib ah
Mamaqasheen mushaar lawaayY
Mamaqasheen beel calam
Intuu fRmajo jogay gabadhan
Dalka iyo dowladaa kamuhinsan
Inkasta oo aan lahay alaha
Tankale somali farmaajo nin
Kafican mahaysaan kuwo
Kufurta lahadlaYaa haqaldamina aniga usa
Baan kunolahay laakiin
Adinka dhibka adinkuu idinku dhici hadii aad difaci wadaydaan farmajo nimanka safN waad taqanàn somali
WAXAAD NAAG NAAG DHALEY WAANA WAX LAGU YAQAAN MAXAMUD SALEEBAN XAARE XUKUN JECEL. MAJEEERTEN WEYNE HA ISKU QABAN…WAXA MASEERSAN OO UU DHAQMA SIDII NAAGIHII WAA MAXAMUD SALEEBAN WAXNA ANAN ISKA CELIN KARIN MAANTA PUNTLAND WAXA DIFAACA WAA MAJEEERTEN KALE IYO DAROODKA KALE EE DEGA PUNTLAND..WAX LA YIRAAH DAROOD YAR YAR MAJIRTO.
Wax la amaano iyo wax la dhaliilo ama la caayo maba arko.
Waxaan arkaa :-
Qaran Socod-barad ah
Madax Fadhi-barad ah
Siyaasiyiin Hadal-barad ah
Shacab Qabyaalad-barad ah
Ganacsato Lacag-barad ah
Wadaado Diin-barad ah
Ciidan Gaardis-barad ah
African Gumeysi-barad ah (AMNISOM )
Iyo inteena halkaan wax ku qorta oo
Yuusuf Jaamac! @@@
Soomaali oo aan kuweenan halkan wax ku qoho ugu horeeyno waa intaas aad ku sheegtay,laakiin Waxaan aad oga helay. Afrikan Gumeeysi barad ah! Kkkkkkk
Dad yar oo Soomaaliyeed oo aan ku jirno baase moog in uu xaalka Soomaaliya yahay, sidaa aad ku sifeeysey xaalka Soomaaliya! Kuwaas oo u fahmay, in aay xilladuba Farmaajo la socotay, aayna wax waliba hagaagi doonaan, marka uu meesha banneeyo!!!
Farmaajo waa dambiile, inantaa kufsigiida iyo dilkeeda waxbuu ka ogyahay, waxaa caddayn kuu ah;
1- Walaashii idil Farmaajo oo sheegtay in lagu soo koriyey hablo Kufsi , dhaqan u lahaa, dumarkana ka Nixon
2- Hore inuu u galay kiiskan oo kale oo gabach Somaliyeed kufsaday, kuwo kalena aan cidi ogayn tiradooda
3- Wuxuu qaabili kari waayey, waalidkii dhalay Ikraan, oo indhaha ayuu ka qarsanayaa, wuxuuna ka baqayaa in wejigiisa Ła dhex arko. Guilty are afraid.
4- Wuxuu si walba isu hortaagay in kiiska Ikraan caddaalad loo helo.
Waa kufsade, saqajaan, qaadle, ma xishoode, kuwa taageersan waa kuwo gabno ah, oo adduun kale iyo aakhrio toona aqoon
Somali ogaada kenyan afka
Somaliga yaqaano ayaa
Badan aniga waxaan ahay
Nin somalia jacal oo lasocday
Xaladihii aan somarnay
Bur burkii kadib wali marag
Resulwara dagaal ku hayo
Haydii sirdonka oo kahoreyay
Rooble waligay maragg nin
Cayenkaas udhaqamoo midakale
Waan wada lanahay yeeli
Mayno arinta uu rooble
Swedan baad qoxi ku ahayed
Nasiib baad uhashay xilsare
In aad kaqabato somalia
Adigoo og dhibka somali ku
Hayso dibadaha ayaad shilimo
Aruursi bilowda waray dalka
Reer muqdisho kali malahan
Jaahil jahiliin kamarqaato
Iyo talada ayaad tahaye
Gabadhan aad nairobi aad gasay oo somali ku fahantay
Hada markii aad aaday nairobi
Ayaad sikaxaysay xogta
Lahayo somalidu kubaraye
Gacatada haisku dilin
War wuxu maxuu ahaa
Kastuumo uhuro ula orday
Waa ciiyal fay cali waynaaday